प्रचण्डको भारत भक्तिले ‘अनकम्फर्टेबल’ जनता | राजनीति | GNN Nepal GNN Nepal प्रचण्डको भारत भक्तिले ‘अनकम्फर्टेबल’ जनता | राजनीति | GNN Nepal
फागुन १५ गते, २०७७ २०:५७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । संसद् पुन:स्थापना पछि सबैभन्दा खुसी र गर्भान्वित महसुस गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शीर्ष स्थानमा पर्छन् । संसद्को विघटन भएकै दिन देखी पुन स्थापनाका लागी सदनबाट सडक ओर्लिएका प्रचण्ड अदालतको फैसला पछि भुँइमा खुट्टो राखेको छैनन् भन्ने टिप्पणी ओली समूहका नेताहरूले गरिरहेका छन् ।
संसद्को पुनस्थापनासंगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह ओलीलाई सत्ताबाट फालेर नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)संग मिलेर सरकार गठन गर्ने तम्सिसकेको छ । तर संसद् स्थापना गर्ने अदालतले फैसला सुनाएको आज चार दिनमा टेक्दा प्रचण्ड भने एक अन्तरवार्ताका कारण विवादमा परेका छन् ।
कारण प्रचण्डको भारत भक्ति वा मोह । उनले शुक्रवार चर्चित पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका केहि वाक्यहरूले उनि भारत भक्त भएको प्रस्ट पारेको छ ।
उनले भनेका भनाई यस्तो थियो :
‘यहाँ कोही कसैका विरुद्ध षड्यन्त्र होइन यो, ती शक्ति मिल्दा नै देशमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण बन्ने भयो र इतिहासले जसलाई अगाडि बढ भनेको हो तिनै अघि बढ्नुपर्‍यो । त्यसो भएर मेरो भनाइ नेपाली काँग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर जाँदा देशको राजनीति चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ, सन्तुलनमा पनि बस्छ ।
सबै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो भएर पनि जान्छ । भारतसँग पनि चीनसँग पनि राम्रो सन्तुलन हुन्छ । अझ भारतसँगको हाम्रो जुन विशिष्ट सम्बन्ध छ, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, धर्म–परम्परा, अर्थतन्त्र, पानी ढलो, खुला सिमाना सबै कारणले भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन पनि नेपालमा स्थायित्व विकास त हुँदैन । त्यसरी हेर्दा म के देख्छु भने नेपाली काँग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतको निम्ति पनि कम्फर्टेबल समीकरण हो । चीनको लागि पनि यो कम्फर्टेबल नै हुन्छ । यति राम्रो सम्भावना अहिले छ, यो सम्भावनामा जानुपर्‍यो भनेर मैले भनेको छु । फेरि आत्म समीक्षासहित भनेको छु, यो नै सबैको हितमा छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
हिजो गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा असम्भव कुरा हो भन्ने केपी ओली, हिजो माओवादीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर बामदेव गौतम र युवराज ज्ञवाली रोल्पा जानु भयो– म र बाबुराम थियौँ अब हामी मिलेर जाने भनियो । त्यो भन्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने केपी ओली, समानुपातिक समावेशी हुनुहुँदैन भन्ने केपी ओली, हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनको नेता त माधव कुमार नेपाल हो नि । हामी सबै सँगै छौँ, नेपाली काँग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिजो साहस गरेर पहल नलिएको भए शान्ति सम्झौता हुन गाह्रो थियो । सात दलको नेताको हैसियतले उहाँले भूमिका खेल्नु भयो । शान्ति सम्झौतामा दुई नेताले हस्ताक्षर गरियो । त्यो सबै शक्ति त हामी एकै ठाउँमा छौँ नि १ यी शक्ति मिल्नुपर्‍यो भन्या हो ।’
भारतसँग नेपालको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्छ । आपसी विश्वासको धरातलमा उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा, ५–७ वर्षदेखि लगातार छु । भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन नेपालमा विकास, समृद्धि र स्थायित्वमा चुनौती हुन्छ भन्ने कन्भिक्सनका साथ भनेको छु।
यो बीचमा जति मेरो भारतमा भ्रमण हुँदा, नेताहरूसँग भेट्दा मैले त्यही कुरा भनेको छु । कताकता प्रचण्डले भन्याजस्तो गर्न सकेन भन्ने कुरा पनि परेको हुनसक्छ । तर मेरो भनाइ के छ भने मैले कुनै अर्को मनसायले गरेको छैन । मैले कति बेला के गर्न सकेँ, कति बेला गर्न सकिनँ त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । हाम्रो पार्टीको आन्तरिक मामिला पनि हो । मैले कसैलाई अविश्वास पैदा होस् भनेर गरेको छैन । भारतप्रति नकारात्मक सोच राखेर मैले केही पनि गरेको छैन । मैले छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, भारतसँग पनि चीनसँग पनि भनेको छु, तर भारतसँगको सम्बन्ध विशिष्ट छ ।
हाम्रो इतिहासले, भूगोलले, संस्कृतिले परम्पराले, धर्मले, अर्थतन्त्रले, पानीढलाले भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने डिक्टेक्ट गरेकै छ । तर भारतले म जस्तो मान्छेलाई जसले शान्ति र लोकतन्त्रको निम्ति यत्रो योगदान गर्‍यो अविश्वास हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
नेपालमा मलाई बेलाबेला मान्छेहरूले बेस्सरी गाली गर्छन् तर अन्तिममा नेता त उही हो भन्छन् । भारतीय जनताले पनि मलाई माया गर्छन् । भारतभरि नै प्रचण्ड राम्ररी जनताको तहमै चिनिन्छ, त्यहाँको मिडिया, बुद्धिजीवी र आमजनताले पनि प्रचण्डलाई सबभन्दा बढी चिन्छन् र माया गर्छन् । किनभने शान्ति ल्यायो ।
अब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसद्मा भाषण गर्दा ‘युद्धबाट बुद्धतिर’ ‘युद्धबाट शान्तितिर’ तपाईँहरूले ठुलो काम गर्नुभयो भनेर जो भाषण गर्नुभयो मैले बुझेको छु, उहाँले त्यो मलाई नै भन्नु भएको हो । मेरो बारेमा र नेपालको बारेमा उहाँले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अधिवेशनमा बोल्नुभयो–नेपालको शान्ति विश्वकै लागि एउटा उदाहरण हो भन्ने स्प्रिटमा बोल्नुभयो । लालकिल्लाबाट पनि उहाँले हाम्रो बारेमा बोल्नुभयो भने उहाँले मलाई कसरी अविस्वास गर्न सक्नुहुन्छ रु म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।
एउटा, असल मित्र र छिमेकीको रूपमा कहिँकतै अलिअलि बादल र तुवाँलो लागेको छ भने पनि क्षणभरमै त्यो तुवाँलो फाटिन्छ, बादल हट्छ उज्यालो हुन्छ । हामी एकअर्कामा भारतीय, कन्सर्न, चासो चिन्तालाई हामीले सकेसम्म छिमेकीको हैसियतले सम्बोधन गर्ने र हाम्रो चिन्ता र चासोलाई पनि भारतले सकेसम्म सम्बोधन गर्ने र यो सम्बन्ध फेरि विकसित हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु ।’
यो अभिव्यक्त सुनेपछि ओली समूहका साइबर सेनालाई भने ‘के खोज्छस् कानो आँखो’ जस्तै भएको छ । धेरै मानिसहरु प्रचण्डको भारतप्रतिको भक्त देखेर आक्रोसित बनेका छन् । सीमा विवाद र सगरमाथा काण्डपछि भारतसंग झनै आक्रोसित बनेका जनताहरू प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि उनको राष्ट्रियतामाथि नै चोटिल प्रहार गर्ने थालेका छन् ।
प्रचण्ड विशेष ‘काँग्रेस, हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका निम्ति पनि योभन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन’ भन्ने वाक्यांशले विवादमा तानिएका हुन् । उनलाई कतिपयले पहिलै भारतको गुलाम भन्ने ट्याक पनि दिएका छन् । तर उनको उक्त वाक्यांशले भने पुष्टि नै भएको छ ।
प्रचण्डले भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याए
१३/१४ वर्ष अघि विभिन्न पत्रपत्रिकाको हेडलाइनमा माओवादीले सार्वभौमिकता अचानक दिल्लीलाई सुम्पेको लेख्ने गर्दथे । प्रचण्डले खुलेआम वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याएका पुष्टि थुप्रै पत्रकारहरूले लेखिसकेका छन् । तर प्रचण्डले भने ती सबैलाई वेवास्ता गर्दै राष्ट्रवादी छवि बनाएर माधवकुमार नेपाल गठबन्धनलाई प्रचण्डले भारतको नोकर भनेर जिस्काएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष प्रकाशले पनि भारतसँगको सम्बन्धबारे जनसमक्ष जाने भन्ने खुलासा गरेका थिए । ओली समूहमा लागी सकेका राम बहादुर थापा बादलले भारतको माओवादीलाई साईजमा ल्याउने भारतीय षडयन्त्र विरुद्ध लड्ने घोषणा समेत गरेका थिए ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू प्रचण्ड भारतमै हुर्किएका जस्ता टिप्पणीहरू समेत गर्छन् । एक सीमाविद् भन्छन्, सिधै दिल्ली बाट निर्देशित भएर प्रचण्डले काम गरेका हुन् भन्ने प्रस्ट हुँदै छ, तब त उनले नेपाल भारत शान्ति सम्झौता रद्द गर्ने पहल जस्ता कुराहरू अघि बढाउन सकेनन् ।
तसर्थ संसद् विघटनपछि पनि प्रचण्डले आफ्ना भाषणमा पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरू पनि गुहारेका थिए । उनि चाहान्थें विघटनलाई लिएर नेपालप्रति केहि कडा बन्दियोस् वा केहि बोली दियोस् । तर नभन्दै अदालतको स्वविवेकले संसद् पुनस्थापना भयो र अब प्रचण्ड भारतलाई कम्फर्टेबल पार्ने समीकरण गर्नेतर्फ लागेका छन् ।
यही विषयलाई जोड्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू निकै आक्रोसमा आएका छन् । पटक पटक छोटे भाइको दर्जा दिदैं आएको भारतलाई कम्फर्टेबल पार्ने प्रचण्डले गरिरहेको समिकरणमा जनताहरुले खुलेर विरोध गरेका छन् ।
एक प्रयोग कर्ता लेख्छन्, ‘एक व्यक्तिको कम्फर्टेबल हुने लोभले देश र जनता अत्यन्तै अनकम्फर्टेबल भएका छन् ।’
व्यक्तिको comfortable हुने लोभले देश र नागरिक अत्यन्तै uncomfortable ।
— Sameer M Dixit, PhD🇳🇵 (@smadixit) February 27, 2021
त्यस्तै अर्को एक प्रचण्डको भनाई लाई व्यङ्ग्य गर्दै स्थायी समिति सदस्य भीम रावललाई मेन्सन गरेर प्रश्न सोध्छन्, यो कम्फर्टेबल सरकार चाहिँ कहिले बन्छ त सर ?
यो कम्फरटेबल सरकार चाँही कहिले बन्छ त, @BhimRawal179 सर ?
— Prakash Timalsina (@prakashujyalo) February 27, 2021
कतिपयले त उनको अभिव्यक्ति पनि संसद् विघटनजस्तै प्रतिगा्रमी भएको तर्क समेत राखेका छन् । एक प्रयोगकर्ता लेख्छन्, प्रचण्डको ‘कम्फर्ट’वाला भनाइ ओलीको संसद विघटनभन्दा ‘प्रतिगामी’ छ । लौ जति नै गाली गर्नुस्,! ुकम्फर्ट’वाला भनाइमा चाहिँ तटस्थ हुन सकिएन ।
जवाफमा – हिजो ओलीले ुरअ’का प्रमुख भेट्दा नि ? नभन्नुस् है प्लिजु, झनै लाज हुन्छ !
प्रचण्डकाे 'कम्फर्ट’वाला भनाइ अाेलीकाे संसद विघटनभन्दा 'प्रतिगामी' छ ।
लाै जति नै गाली गर्नुस्, 'कम्फर्ट’वाला भनाइमा चाहिँ तटस्थ हुन सकिएन ।
जवाफमा 'हिजाे अाेलीले 'रअ' का प्रमुख भेट्दा नि ?' नभन्नुस् है प्लिज', झनै लाज हुन्छ !
— Pramod (@Prmdneupane) February 27, 2021
सामाजिक संजालमा प्रचण्डको अभिव्यक्ति भाइरल भएपछि आएका थप केहि प्रतिक्रिया
क्यान्टोनमेन्टमा हाम्रा लडाकु यति मात्र थे, हामीले बढाएर यति कायम गर्न सफल भयौं भन्ने उ बेलाको भिडियो भन्दा पनि भाइरल हुने पो देखियो त प्रचन्डको कम्फर्टेबल वाला भिडियो क्लिप त।भित्री कुरा त कि उनी,कि कम्फर्टेबल हुनेले जानुन।तर हामी जनताका लागि पनि नानीका बा बेला बेलामा rocks क्या
— Jainendra Jeevan (@jainendrajeevan) February 27, 2021
सबैले कम्फर्ट जोन खोज्ने हुन्
मुलतः नेकपाको कानुनी विभाजन एकपछि अर्को जेलिदै जाने छ
विचारको लडाइ थियो भने चिन्ह र नाम जस्ता प्राविधिक चिजमा अल्झिएर बस्ने थिएनन्,
चीज कसलाई कसले कम्फर्ट जोन दिने भन्नेमा रहेकाले यस्ता पिरोग्राम अरु केहीदिन चलिरहन्छन्।
हुने के हो त्यो किल्लोर नै छ!
— Matrika Poudel (@matrikas) February 27, 2021
'बाघ हुँ भन्थ्यो; अन्तिममा आएर 'म्याँउ' गर्यो' को हो भन्नुस्? 😊
— डा. गोथे🇳🇵🙏 (@Dr_Gothe) February 27, 2021
मन भित्र दबेर बसिरहेको कुरा नै भन्नुभएको हो तर हामीले सुन्दा अलि कम्फरटेबल भने भएन !!
प्रभुको जो आदेश !!!
सत्य आफ्नै मुख बाट उजागर हुन्छ भन्थे हो रहेछ !भारतीय सुगमताको लागि कांग्रेस, प्रचण्ड गुट र जसपा मिलेर गठबन्धन गरि सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भनाइ सुनेर मर्माहत भैयो।
— Shanta Chaudhary (@shantadangnepal) February 27, 2021
हामीलाई भारत र चीनलाई Comfortable बनाउने नेता चाहिएको हो की ? नेपाल र नेपाली जनतालाई Comfortable महसुस हुने नेता चाहिएको हो?
— Roshan Khadka (@roshankhadka3) February 27, 2021
— Rupesh Shrestha (@Roopess) February 27, 2021
हाम्रो लिपुलेक फिर्ता दे
तिम्रो प्रचण्ड लैजा#oldisgold 🤣 pic.twitter.com/sOZaFIRZyp
— चित्र-शब्द (@picwrds) February 27, 2021
राष्ट्रवादीहरु उठ्नै पर्ने भयो उठ
जुट्नै पर्ने भयो अव जुट
भारतका लागि कम्फर्टेवल सरकार बनाईदिन पर्‍यो भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति आपत्ति जनक छ , खेदजनक छ । राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरु संगठीत भएर विरोध गरौं !
— Bhagabati Neupane (@BhagabatiMe) February 26, 2021
बिरालो जति खास्टोले छोपेपनि म्याउँ गर्छ गर्छ!नेपाली राजनीति र सत्य ओकल्ने गरिब नेता ।।
— Rajendra Baniya (@RBaniyaji) February 27, 2021
यस्लाइ मैले मुजि मात्रै भने😂😂 pic.twitter.com/xXXCOg5MbW
— साजन पाल्पालि🇳🇵 (@sajan_palpali) February 26, 2021
केपी ओलि र प्रचण्डका यो दुइ बेग्ला-बेग्लै भनाई सुन्नुहोस अनि को देशभक्त्त को गद्दार आफै निर्णय लिनुस । pic.twitter.com/BX5KkAPU45
— सुरेश भण्डारी (@SKBkshetri) February 27, 2021
सिक्किम मा पनि लेन्डुप दोर्जी हरु यस्तै भारत लाई #कम्पर्टेबल हुने गरि सरकार बनाउदै गर्दा विलय भएको थियो साथि हो।प्रचण्डको कुरा सानोतिनो होइन।
— टेक नारायण पौडेल'दयालु' (@tnpoudelymailc2) February 27, 2021
संसदीय समितिको छलफल अब भर्चुअल माध्यमबाट हुने